Fonjamby – Afrika faritra faha-3: firenena 13 ho avy eto Madagasikara | NewsMada
Fonjamby – Afrika faritra faha-3: firenena 13 ho avy eto Madagasikara
Araka ny efa fantatra, handray ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika i Madagasikara, ho an’ny faritra faha-3, hotanterahina etsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny 5 hatramin’ny 11 novambra izao, araka ny nampahafantarin’ny federasiona malagasy ny fibatana fonjamby, omaly, nandritra ny tafa nataon’ny tamin’ny mpanao gazety. Efa firenena manerana an’i Afrika miisa valo amin’ireo 13 handray anjara, amin’izao fotoana izao, no nahatonga ny antontan-taratasiny eo anivon’ny federasiona malagasy ny taranja fibatana fonjamby ary nanambara ny fahavonany hifaninana ka ho avy eto Madagasikara amin’io fotoana io.
Tsahivina fa mbola tafiditra hatrany ao anatin’ny fifantenana ny hiatrika ny “Lalao olympika”, hatao any Tokyo, ny taona 2020, ity fifaninanana afrikanina hotontosaina eto amintsika ity. Nambaran-dRandriamanarivo Harinelina Jean Alex fa efa nahazoana fankatoavana avy amin’ny minisiteran’ny Tanora sy fanatanjahantena ny fandraisantsika izany ary nisaorany manokana ny fitondram-panjakana.
Efa miomana ary vonona ireo atleta malagasy hifaninana mandritra io ady goavana io, indrindra ireo hiady ny tapakila ho an’ny “Lalao olympika” amin’ny taona ho avy, raha ny fanazavana hatrany. Marihina fa ireny efa hita matetika ireny ihany, toa an-dry Rosina, no hiady ho an’ny sokajy “seniors”, raha toa ka homena sehatra kosa ireo taninketsa vao nisondrotra, ho an’ny sokajy tanora.